လှိုင်သာယာတွင် မနေ့ညက ပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ‌အဆောင်နေလူငယ်၅ဦးအထက်အဖမ်းခံရ - Myanmar Pressphoto Agency
လှိုင်သာယာတွင် မနေ့ညက ပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ‌အဆောင်နေလူငယ်၅ဦးအထက်အဖမ်းခံရ
MPA August 23, 20212min read
[ English Below ]
လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် ဩဂုတ်လ၂၂ရက်နေ့ညက ပစ်ခတ်မှုအချို့ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အဆောင်ငှားရမ်းပြီးနေထိုင်သူ လူငယ်ငါးဦးနှင့်အထက်အဖမ်းခံခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။
“ကျွန်​တော်တို့ လက်ရှိအချိန်ထိရရှိတဲ့သတင်းတွေအရ မနေ့ညက ငါးယောက်ဖမ်းခံရတာတော့ အတည်ပြုလို့ရတယ်။ အဲ့ထက်ပိုနိုင်ပါတယ်“လှိုင်သာယာမြို့နယ် ဒေသခံလူငယ်တစ်ဦးက MPAသို့ ပြောသည်။
ဩဂုတ်လ၂၂ရက်နေ့ညက လှိုင်သာယာမြို့နယ်၁၀ရပ်ကွက်ရှိ အ‌ဆောင်တစ်ခုမှ လူငယ်ငါးဦးထက်မနည်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူများသည် ဧည့်စာရင်းဖြင့်ဖမ်းဆီခံရခြင်းဖြစ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေများကို သိရှိရခြင်းမရှိ‌သေးပေ။
မနေ့ကနံနက်ပိုင်းတွင်လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ဘုရင့်နောင်တံတားပေါ်တွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့်လူငယ်အချို့ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်သားတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။
ထို့နောက်ညနေပိုင်းတွင် ရွှေလင်ဗန်းစက်ရုံအနီး မီးသတ်ရုံးနားတွင် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သေးကြောင်းသိရသည်။လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် ဩဂုတ်လအတွင်း အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က လူငယ်အမြောက်အမြားကိုဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူများတွင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်သည့်လူငယ်များပါဝင်ခဲ့သလို ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ပရဟိတလူငယ်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုသားဇော်အပါအဝင် လူငယ်၂၀ဦး ထက်မနည်း အဖမ်းအခံခဲ့ရသည်။
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က လက်ရှိအချိန်တွင်မြို့ကြီး အများအပြားတွင် ပိုက်စိပ်တိုက်ရှာဖွေခြင်းများ၊ လူငယ်များကိုဖမ်းဆီးခြင်းများပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP၏ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဩဂုတ်လ၂၂ရက်‌နေ့အထိ စစ်တပ်မှ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသူ၅၀၀၀ကျော်ရှိပြီး သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသူ ၁၀၀၉ဦးရှိလာပြီဖြစ်သည်။
#လှိုင်သာယာ #ဖမ်းဆီးခံရ #MPA
More than Five Young People inaDormitory Arrested in Last Night’s Shooting in Hlaing Thar Yar
On August 22 night, there wasashooting in Hlaing Thar Yar township and more than five young people, who were staying inarented dorm, were arrested.
“According to the latest update, it was confirmed that five were arrested. It could be more than that,” saidaHaling Thar Yar resident to MPA.
On August 22 night, more than five young people fromadorm in Ward 10 were arrested. They were reportedly arrested on guest list issue and no further information has been known about them.
Yesterday morning, there wasashooting on the Bayint Naung Bridge in Hlaing Thar Yar between the terrorist military and some young people and one soldier was killed. Another shooting took place near Shwe Lin Pan factory (near Fire Brigade) later the same day.
In Hlaing Thar Yar Township, many young people have been arrested by the terrorist military within the month of August.
Among the arrested were activists and anti-military dictatorship young people. Last week, more than 20 young people includingacharity volunteer Ko Thar Zaw were arrested.
Currently, the terrorist military is carrying out intense searches in many big cities and young people are getting arrested. According to the report of the Amnesty Association for Political Prisoners (AAPP) per August 22, more than 5000 have been arrested and 1009 have been killed by the military.
#HlaingTharYar #Arrested #MPA
Tags: Arrest militarycoup MPA Myanmar News Politics
Previous: စစ်ကောင်စီက ဖမ်းမိသည့် PDF များကို အသုံးချ၍ လွတ်မြောက်နေသူများကို ထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးနေ
Next: စစ်ပွဲကိုရှောင်ရှားပြီး နိုင်ငံရေးပြဿနာကို စစ်မှန်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းရန် လိုလားမျှော်လင့်နေကြောင်း အေအိုင်အိုထုတ်ပြန်
ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် သပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုလင်းပိုင်စိုး သေဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ၁၈ရက်ကြာမှ မိသားစုကသိရှိရ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေကို အမှုအခြေအနေများ မပြောရန် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတားမြစ်
ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြ နှုတ်ထွက်ရန် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှအရာရှိနှစ်ဦးကခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ထွက်ဆို
ဟုမ္မလင်းတွင် CDMပြုလုပ်ထားသည့် ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးသေနတ်ဖြင့်အချက်ပေါင်းများစွာဖြင့်ပစ်သတ်ခံရ
ကျပ်သိန်းပေါင်းလေးသောင်းနီးပါးနှင့် အလုပ်မဖြစ်သေးသော ကညင်ချောင်းစီးပွားရေးဇုန်
“ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးက ကမကထလုပ်ပြီးတော့ ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုစုဖွဲ့ပြီးတော့ ချင်းပြည်နယ် ကြားကာလကာကွယ်ရေးကော်မတီဆိုပြီး ဖွဲ့ပြီး အကုန်လုံးနဲ့ ပူးတွဲတိုက်ခိုက်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။”
အထက်မြတ်လေး မြိုစစ်ဘေးရှာင်စခန်းတွင် နေအိမ်တချို့လိုအပ်နေ